Madaxda Dowlada Dhexe iyo Kuwa Maamul Goboleedyada oo ka tacsiyeeyay Geerida Nabadoon Axmed Diiriye - Caasimada Online
Home Warar Madaxda Dowlada Dhexe iyo Kuwa Maamul Goboleedyada oo ka tacsiyeeyay Geerida Nabadoon...
Kismaayo (Caasimadda Online) –Iyadoo uu xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday Allah u naxariistee nabadoon Axmed diiriye cali oo kamid ahaa Odaaysha dhaqanka Beelaha Soomaaliyeed kuwa ugu Caansan ayaa waxaa geeridaasi ka tacsiyadeeyay Madaxda dowlada dhexe iyo kuwa Maamul Goboledyada qaar.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u direy qoyskii, ehaladii iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Allaha u naxariistee Nabaddoon Axmed Diiriye Cali.
“Inaalilaahi waa inaa ilayhi raajicuun, Waxaan uga tacsiyeynayaa Shacabka Soomaaliyeed geerida Nabadoon Axmed Diiriye oo xalay ku geeriyoday Muqdisho. ilaahay ha u naxariisto nabadoonka, samir iyo iimaanna ha ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay ayaa alagu yiri qoraal ka soo baxay Xafiiska madaxweynaha Somalia.
Sidoo kale reysulwasaaraha xukuumada Somalia xasan cali kheyre ayaa dhankisa ka tacsiyeyay geerida ku timid Nabadoonka waxaana uu rabi uga baryay Naxariista Janno.
Axmed ducaale geele xaaf madaxweynaha maamulka Galmudug oo la hadlay idaacda kulmiye ayaa tilmaamay in Axmed diiriye uu ahaa nabad u dhaxeeyay umada Somaaliyeed uuna ka qeybqaatay nabadeynta dalka uuna shacabka soopmaliyed uga tacsiyadeuynayo Geeridaasi.
Gudoomiyaha Gobolka banaadir ahna duqa muqdisho Craxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay in dhamaan shacabka soomaaliyeed gaarahaan ehelada marxuumka uu la wadaagayo xanuunka geerida Allah u naxariisteen nabadoon Axmed diiriye.
Inaalilaah wa inaa ileyhi Raajicuun.